SIYAABAHA LOOLA TACAALO LAMID AH JILIF ON GEEDO TUFAAX AH - BEER CAGAARAN
Siyaabaha loola tacaalo lamid ah jilif on geedo tufaax ah
Kaabashka xayawaanku waa xayawaan ku nool jilbaha geedka oo quudiya, taas oo ka dhalatay geedka dhab ahaan u dhiman doono.
Apple, sidoo kale walxaha jilicsan ee aan duubnayn ee ay menu waxay door bidaan geedo waaweyn oo geedo ah - tufaax, cherry, duub, iwm.
Lamishles Bark ayaa awood u leh burburinta ma aha oo kaliya geedo gaar ah, laakiin sidoo kale beeraha iyo beeraha oo dhan.
Dagaalka jilbaha jilicsan Waa arrin aad u adag, laakiin leh daryeel haboon iyo daaweyn gaar ah waxaad ku guuleysan kartaa guusha.
Noocyada daryeelka ee daffodils ee beerta dalka.
Sida loo dhiso dahlias dhulka, akhriyo adoo gujinaya bogga: //rusfermer.net/sad/tsvetochnyj-sad/vyrashhivanie-tsvetov/georgina-koroleva-sredi-tsvetov-na-osennem-balu.html
Dhibaatada ay sababto jirridda jilicsan ee geedka tufaaxa
Sida hadalka caanka ah uu u socdo, waxaad u baahan tahay inaad ogtahay cadowga. Sidaa darteed, si aad u bilowdo, aan u eegno waxa jirridda jilifku yahay.
Kaabashka jilifku waa qayb yar oo qiyaas ah, qiyaastii 5-6 cm. Jirka jirka qaangaarka ah waa mid tufan, midab madow, qaabka u dhow tuubada.
Goynta geedka geed, xayawaanku wuxuu degaa halka, quudinta ku noolaanshaha unugyada nool.
Xayawaanku wuxuu kaloo ku jiraa gudaha geedka. Guga, haweenku waxay dhigtaa ukumaha, dirxiga hatching ku noolaanaya hal sanno oo ay u dhacdo by haweeney, iyo quudiyo on dheecaan geedka, iyo guga waxaa la aasaasay galay kuwa waaweyn dadka waaweyn.
Duufaannada jilifku waxay burburiyaan geed, jebinta gudaha - waxay sameeyaan boqollaal dhaqdhaqaaq, oo ka soo jeeda hal dhibic ilaa kuwo kale. Socdaalkani waxay hor istaagayaan dhaqdhaqaaqa caadiga ah ee casiirka, taas oo sababa daciifinta iyo qalajinta dhicis ah ee geedka.
Boodhka ayaa isla markiiba tuuray. Marka laga reebo in la cuno jilif, cayayaanka ayaa sidoo kale u dhaqma sida sidayaal cudurada, labadaba fungal iyo infekshin.
Gawaarida ayaa burburin kara inta badan dalagga. Baro sida loo heli karo wireworm ka baxsan beerta.
Halkan ka akhri sida loola macaamilo barafka baradhada Colorado.
Sidee looga takhalusaa curyaanka? Talooyin tixraac ah: //rusfermer.net/ogorod/vrediteli-ogorod/bor-ba-s-vreditelyami-vrediteli-ogorod/nasekomoe-medvedka-uznaj-i-ppedi.html
Waa maxay sababta jirridda jilifku u weeraraan geedka tufaaxa
Sida caadiga ah, duqsigu waa inuu doortaa geedo jirran ama daciif ah dhibbanaha. Cilmi-baadhayaashu waxay caddeeyeen in duqsiyadani ay leeyihiin dareen xoogan oo ur ah, si ay u uriyaan geedaha ay u baahan yihiin xataa xitaa masaafo aad u ballaaran, ilaa illaa kilomitir.
Jiljirsan waxaa lagu magacaabi karaa geedo badan oo kudhaca dhismayaasha iyo midba midka kale - tani waxay niyadjabaysaa nidaamka asaasiga ah, ma siidayn karaan si buuxda. Intaa waxaa dheer, dhaawacyo kala duwan ee nooca farsamada ee dhirta - dildilaaca, dabaqyo furan, iwm waa halis ah.
Si kastaba ha noqotee, marmarka qaarkood caleemaha jilifku waxay ku weeraraan geedo caafimaad leh, iyo geedo tufaax ah ayaa si gaar ah ugu nugul. Inta badan tani waxay dhacdaa haddii duqsigii jilifku ku dhuftey beerta, iyo geedkii uu waxyeeleeyaa qayruubka aan la shaqeynin waqtigaa.
Sidaa darteed, duqsigii jilif, oo la macaamilay hal shay, wuxuu sii wadaa kan xigta, kaas oo ku dhow.
Tani waxaa kale oo ka mid ah jiritaanka dhimirka, jirridda iyo fungi on goobta, taas oo ah meel fiican oo loogu talagalay likjiyo jilif si ay u noolaadaan.
Sidoo kale, jiritaanka jilifku wuxuu degi karaa geedahan oo dhowaan lagu soo celiyay - muddo 1-2 sano ah. Si kastaba ha ahaatee, kiiskan, sababta ugu badani waa daciifnimada geedka, taas oo aan weli ku guulaysan in ay xidid ku filan.
Sabab kale oo loo gooyo geedka jirku ku dhaco waxaa laga yaabaa inuu noqdo mid aan ku filnayn, daaweyn aan haboonayn ama aan daweynin ee geedka, iyo sidoo kale maqnaanshaha dhammaystiran.
Calaamadaha dadka qaniinyada jilibka ah
Waxaa jira cayayaanka qoryo badan oo badan. Oo jiriddu mar walba kama masuul aha cudurka ama dhimashada geedka. Si aad u fahamto sida loola dagaalamo, marka hore waxaad u baahan tahay inaad ogaato cidda la dagaalameysa.
Sidaas, tixgeli calaamadaha muhiimka ah ee tilmaamaya in jiritaanka jilifku uu gooyey geedkii:
joogitaanka brown ama jaalle ah oo u dhow geed - waxaa lagu tuuraa lowska iyadoo la marayo geeddi-socodka gaabinta marxaladaha, iyo sidoo kale, urta boodhahan ayaa soo jiidata dadka kale ee qashinka caarada;
kambiyuutarada ayaa u muuqda beerta ama geed khaas ah - shimbirahan waxay ku quudiyaan kuwa lamid ah;
godadka wareega ah waxay ku muuqdaan jilif, waxaa sidoo kale loo yaqaannaa duullimaadyada duulimaadka, rinjiga ayaa sidoo kale laga qaadi karaa halkaa;
Jilibku wuxuu ka soo baxaa jir geedka - tani waa calaamad hubaal ah in geedka hore u dhintay oo aan waxba laga qaban karin; go'aanka saxda ah ee kiiskan waa in laga saaro geedka;
hoosteeda hoosteeda waxaa ku yaal sawirro kala duwan - waxay u muuqdaan inay sabab u yihiin in ay ukumo dhashaan.
Akhri qoraalka ku saabsan daryeelka iyo degitaanka marigolds.
Ubaxyada Nasturtium waa quruxda quruxda badan ee beertaada: //rusfermer.net/sad/tsvetochnyj-sad/vyrashhivanie-tsvetov/posadka-nasturtsii-vyrashhivanie-i-pravilnyj-uhod-za-nej.html
Siyaabaha loola tacaalo lowska jilicsan on apple
La dagaallanka jiritaanka jilicsan ee beertu waa mid adag, mararka qaar ma guulaysan. Dabcan, way ka fiican tahay in dhirtu si fiican u ilaaliso, u sameyso ujeedooyin ka hortag ah, ka dibna khatarta ah in la dagaalo dul-qaadidda dulinka ayaa lagu yarayn doonaa ugu yaraan.
Si kastaba ha noqotee, waxa la samaynayo haddii jiritaanka caleemaha weli ku nool yihiin geed? Tixgeli hababka lagula tacaalayo cayayaankan khatarta ah.
1. Ka hortagga geedaha beerta. Tan waxaa ka mid ah aqoonsiga dhirta bukaanka ah, daaweynta, haddii ay suurtogal tahay, ama dhamaystirid dhamaystiran si looga fogaado infekshannada deriska ah.
2. Samee baadhitaan joogto ah oo geedaha ku yaal. Haddii, natiijada, calaamad muujinaysa muuqaalka muuqaalka jirridda jilicsan ayaa la ogaaday, qaybta ay saameysey ee jirku waa in la nadiifiyaa jilif - sida caadiga ah, ukumo ay gabadhu gasho.
Haddii aagga ay aafadu yartahay, waxaad ku rusheeyaa geedka xal karbofos ama Chlorophos. Waxa kale oo lagama maarmaan ah in la ururiyo caleemo dhacday iyo laan qallalan - waxaa jiri kara dirxiga - oo gubi.
3. Mid ka mid ah hababka waa qaadashada lamid ah. Kordhiso guga, ka dib dhirta dhirta.
Laamaha la gooyey waxaa la dhigaa hareeraha qalfoofka geedaha khudaarta. Xilliga xagaaga, saylaha jilifku waxay ku degaan laanahan, iyo dayrta waa la gubay.
4. Haddii laamuhu ay waxyeeleeyeen duqsigu, waa in la gooyaa, waana in la gashadaa lakabyada digada iyo dhoobada ama rinjiga saliidda.
5. Daaqsiinta geedaha leh kiimikooyinka waa la fuliyaa isla markiiba ka dib marka dhirta ay ubax yihiin, maaddaama ay tahay xilligaas muddadan oo ah duqsiyaadka duulaya.
Hawlgalka noocan oo kale ah ayaa lagu samayn karaa marxalado dhowr ah, laakiin aan ka horeyn laba toddobaad ka dib markii hore.
6. Intaas waxaa sii dheer, kiimikada waxaa si toos ah loogu daadin karaa kuwa lamid ah ee lagu duubay qashinka. Isticmaal sirijiyaal la isticmaali karo.
7. Qabashada daaweynta sunta cayayaanka, waxaad u baahan tahay inaad dareen gaar ah u yeelato qoyaan badan oo qoyan.
Dhibaatada ka soo duulaya jilif jilicsan waa mid aad u ballaaran, waxaana inta badan la barbar dhigaa baradho baradho oo Colorado ah. Hababka lagu sharraxay ayaa ka caawin doona inuu bannaanka u ilaaliyo dhirtooda geeddeeda sababtoo ah weerarro jilicsan oo jilicsan. Dhammaantood waa kuwo naxariis badan oo kaliya ayaa ku xaddidan kaliya ka saarida meelaha shakhsiga ee ay saameeyeen.
Xaalado badan, tani waa ku filan, laakiin xaalada waa in si qumman loo qiimeeyaa, haddii geedku si xun u waxyeelo, waxay noqon doontaa mid caqli gal ah in la gooyo si looga hortago in jiritaanka jilifku uu u faafo geedaha kale.
Aglaonema Maria: sharaxaadda iyo daryeelka guriga
Ogoow inta baro baranbaro ku nool? Domestic iyo duurka. Waa maxay wareeggooda nolosha
Sidee loo karsado yaanyada la kariyey ee daadi ah biyo qabow oo qalalan? Cuntooyinka ugu fiican
Qaboojiyaha qabowga ee qaboojiyaha ah oo dhan qaboobaha jiilaalka
"Metronidazole": tilmaamaha loo isticmaalo digaagga
Kaabashka waa khudaar caan ah oo badan oo reer Ruush ah. Waa qayb ka mid ah kaabajka, borscht iyo saladh, sidaas bannaanka sidaas aad rabto in ay u badbaadin for jiilaalka. Meesha ugu fiican ee lagu keydiyo kaabajka xilliga jiilaalka waa maqaasiinka (dhulka hoose). Sida loo keydiyo kaabajka Maqsin ee jiilaalka? Isku dhafka hoose. Qof kasta maahan mid ku haboon kaydinta muddada dheer ee kaabajka. Read More
Waa maxay yaanyada koraan laynka dhexe, Ural iyo Siberia? Dib u eegida noocyada yar yar ee koraya iyo noocyada kale ee dhul furan
Honeysuckle kala duwan "Nymph": sharaxaad ka kooban baadiyaha iyo berry